Fitokanana sinibe fitahirizan-drano tao Antanetibe Anativolo – Sénat de Madagascar
Fitokanana sinibe fitahirizan-drano tao Antanetibe Anativolo
August 1, 2018 Landivola CATUCIA
Notokanana ny Sabotsy 28 Jolay 2018 teo ny sinibe fitahirizan-drano mirefy 50 metatra toratelo ary mitentina 12 tapitrisa Ariary izay hamatsy rano ny Kaominina Antaneitibe Anativolo ao amin’ny Distrikan’i Anjozorobe izay notarihin’Andriamatoa Mohamed Mourad ABDIRASSOUL, Loholon’I Madagasikara sady Kestora voalohany ao amin’ny Antenimierandoholona, niaraka tamin’ny Loholona isany RAKOTOZAFY Jean Martin, izay miandraikitra voalohany io Distrika io, ny Loholona RANDRIAMALALARISON François Xavier izay efa “medecin inspecteur” tany an-toerana , ary ny Loholona RAJOBSON Hoela Johary izay zanakin’ny distrika .
Ho fahatsiarovana ny nanaovan’ny Loholona Mohamed Mourad ABDIRASSOUL fanompoam-pirenena ivelan’ny tafika tamin’ny taona 1978 sy 1979 tao amin’io Kaominina io no tena antony nanorenany an’io foto-drafitr’asa io amin’ny maha-asa sosialy azy.
Efa nametraka tolo-dalàna moa izy amin’izao fotoana izao ny hamerenana indray izany fanompoam-pirenena ivelan’ny tafika izany ho mariky ny fitiavan-tanindrazana.
Nanatrika io fotoan-dehibe io ny Lehiben’ny Faritra Analamanga sy ny Ben’ny Tanàna tao an-toerana, ka nanomezan’izy ireo fisaorana ny Loholon’I Madagasikara tamin’ny adidy masina izay nataony.
Nandritra izany lanonana fitokanana izany no namindran’ Andriamatoa Mohamed Mourad ABDIRASSOUL ny andraikitra tamin’Andriamatoa RAKOTOZAFY Jean Martin ny maha Tompon’andraikitra voalohany ny Distrikan’Anjozorobe azy. Nametraka ity farany ny fepetra mba hitandroana ny foto-drafitr’asa misy ao an-toerana, indrindra fa io vao notokanana io.